UBabes Wodumo nesiqalo esisha | News24
Durbna - Umculi wakuleli ophinde abe ngumdansi, uBongekile "Babes Wodumo" Simelane usethole inkampani entsha ezophatha izindaba zakhe, kubika iDrum.
Le ntokazi isilaxaze abaphathi bayo enkampanini iWest Ink yajoyina i-African Star Communications ukuthi kube yiyona evuselela isithunzi sayo futhi iqinise nodumo lwayo.
UJustine Abrahams we-African Star uthe: “UBabes uyisihlabani esithandekayo futhi sekunesikhathi sifisa ukusebenzisana naye. Asimthathiswanga wukuthi uxinwe yizinkinga kodwa sifuna ukusimamisa izinga lakhe.”
OLUNYE UDABA: Ulaxazwe yimenenja uBabes Wodumo
UBabes usenezinsuku ezimbalwa ejoyine le nkampani ngemuva kokukhalaza kwabalandeli bakhe ngokuthi abaphathi bakhe yibona abehlisa isithunzi sakhe nabadicilela phansi igama lakhe.
Umsindo ususwe wukuthi le ntokazi ayikwazanga ukuba yingxenye yomcimbi wama-BET Awards yize nayo ibengomunye wabaculi abaphakanyiselwe indondo yabaculi base-Afrika abavelele.
Yize esazoqhubeka ukuqopha umculo wakhe eWest Ink kepha izindaba zakhe sezizophathwa yi-African Star.
Lezi zindaba zamenyezelwa ngoLwesihlanu ngesikhathi iWest Ink ibize isithangami sabezindaba esiphuthumayo eThekwini, yazwakalisa nokuxolisa kwayo ngezinxushunxushu ezibe khona ngodaba lwe-visa kaBabes.